Harena an-kibon’ny tany : mampita ny traikefany amin’ny fanofanana i Aostralia | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany : mampita ny traikefany amin’ny fanofanana i Aostralia
Nanomboka, omaly mitohy anio, ny fampiofanana teknisianina 24 avy amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika ; Tontolo iainana ; Fitantanam-bola, eny amin’ny MBC Ivato. Teknisianiana roa, vavy sy lahy, avy any Aostralia ny manome fiofanana ireo Malagasy ireo.
Taranja omena mandritra ny fanofanana ny momba ny lalàna, ny tontolo iainana, ny fitantanana, ny fampidiran-ketra, ny fikarohana. « Manana traikefa ampy amin’ireo taranja ireo i Aostralia eo amin’ny fitrandrahana harena ambanin’ny tany tato anatin’ny 120 taona ka tsara ifampizarana amin’i Madagasikara », hoy ny masoivohony, Rtoa Jenny Dee.
Efa miara-miasa amin’i Madagasikara hatry ny ela i Aostralia, ary notsindrin’ny mpampiofana iray ny fampiharana hentitra sy fanaraha-maso ny fifanarahana rehetra ifanaovan’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Anisan’ny hampitaina amin’ireo mpiofana ny « Fanaraha-maso ny tontolo iainana mifandraika amin’ny asan’ireo mpitrandraka ». Manana fandaharanasa iray, « Australia Awards », ny fanjakana aostralianina ho fanomezana vatsim-pianarana hanarahana fiofanana any aminy, momba ny politikan’ny fanjakana sy ny harena ambanin’ny tany.
Mampita ny traikefany eto Madagasikara izany ry zareo Aostralianina : fampiasana teknolojia, fiarovana ny tontolo iainana, ady amin’ny kolikoly ary indrindra, ho fampidiram-bola ho an’ny fanjakana. Mifandray amina sehatra hafa ny asan’ny indostria mpitrandraka, toy ny fambolena, ny famatsiana herinaratra, ny fizahantany, ny asa vaventy. Noho izany, ny fandrosoana hita avy amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany tokony hampivoatra ny sehatra maro hafa.
Fivoriana tany Rosia
Nohararaotin’ny minisitra Zafilahy Ying Vah ny fotoana nitondrany fanazavana momba ny fivoriana natao tany Rosia, ny herinandro lasa teo. “Nafantoka indrindra momba ny fanadihadiana ny tontolon’ny harena an-kibon’ny tany ny fihaonana. Avy amin’izany, ohatra, ny hamoahana sary hahafantarana ny harena misy isam-paritra. Miainga avy amin’izay ny hisarihana ireo mpampiasa vola, sy hahalan’ny fanjakana ny tokony ho anjarany”, hoy ny minisitra. Nasaina manokana tamin’io fotoana io ny filoha frantsay, ny praminisitra japoney, ny filoha lefitra sinoa…